Origem HS-3 हेडफोन विश्लेषण, तपाईको हेडफोन ताकि तपाइँ रोक्नुहुन्न | ग्याजेट समाचार
हामी परीक्षण गरिरहन्छौं संगीत सम्बन्धित ग्याजेटहरू। सहायक उपकरणहरू जुन हामीलाई हाम्रो स्मार्टफोनबाट अधिक प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। आज हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं हामी मध्येका लागि हेडफोनहरू जो हामी खेलकुद गर्दा संगीतको आनन्द लिन चाहन्छौं, the Origem HS-3.
जस्तो कि हामी बजारमा देख्न सक्छौं, हाल सयौं मोडेलहरू छन् हेडफोन। वास्तवमा Wiereles ध्वनि वायरलेस टेक्नोलोजी प्रस्ताव गर्नेहरू सबैभन्दा नयाँ हुनको लागि बाहिर उभिन्छन्। तर प्रत्येक प्रयोगकर्ताको आवश्यकता अनुसार, यी हेडफोन अनुपयुक्त हुन सक्छ।
1 Origem HS-3, तपाईंको संगीत ताल अनुसरण गर्दछ
2 हाम्रो गतिविधिलाई समर्थन गर्न डिजाइन गरिएको
3 आश्चर्यजनक गुणवत्ता ध्वनि
4 Origem HS-3 विशिष्टता तालिका
5 पेशेवरहरू र Oregm HS-3 को विपक्ष
Origem HS-3, तपाईंको संगीत ताल अनुसरण गर्दछ
हामी भन्छौ, खेल को प्रकार अनुसार जुन तपाईं अभ्यास गर्नुहुन्छ। र पनि गहनता अनुसार जुन हामी यसलाई अभ्यास गर्छौं, सानालाई TWS हेडफोन बाहिर जान सक्नुहुन्छ असहज। तौल वा प्रदर्शनको कारणले होईन। तर हो कानबाट अलग गर्न र गिरने तल ब्रेकिंग, हराइरहेको छ, र अन्ततः हाम्रो ताल रोक्दै।
संग Origem HS-3 तपाईं केवल आफ्नो उत्तम मार्क पिटाई को बारे मा चिन्ता हुनेछ। यो यस्तै हो सोचविचार गरी बनाईएको हो कि तिनीहरू खस्नेछैनन् वा ढीला हुँदैनन्। तपाईंको हेडसेटको शारीरिक संरचनाको अतिरिक्त, भित्र intraural ढाँचा त्यो एकदम फिट हुन्छ। HS-3 तिनीहरूसँग अर्को द्रुत पार्ने तत्त्व छ ता कि उनीहरू न त झर्छन् न हामी तिनीहरूलाई हराउन सक्छौंr.
La Origem हस्ताक्षर २०१ long मा धेरै पहिले जन्मिएको थियो। द्वारा बनाईएको अनुभवी ध्वनि र प्रविधि ईन्जिनियरहरू। र संगीतको बारेमा जुनसुकै डिजाईन टीमको साथ। तिनीहरूको मुख्य प्रेरणा प्रस्ताव छ सस्तो मूल्यमा सबै भन्दा राम्रो सुन्ने अनुभव। तर एक आकर्षक र नवीन डिजाइन उपेक्षा बिना।
यो स्पष्ट छ कि Origem HS-3 ध्यान नदिनुहोस्। उनीहरूसँग छ आँखा आकर्षक बनाउने डिजाइन जबकि सुरुचिपूर्ण। कालो र रातो र ofको छनोटन सफल छ किनकी तिनीहरू अलग देखिन्छन्। तिनीहरूसँग केबल छ भन्ने धारणाले उनीहरूलाई अन्तिम जस्तो नलाग्न सक्छ। तर यो स्पष्ट छ कि त्यहाँ ती हुन् जसले हेडसेटको बाहिर बटनहरू मन पराउँछन् तिनीहरूलाई अधिक सजिलैसँग हेरफेर गर्न।
अमेजनमा यहाँ Oregm HS-3 खरीद गर्नुहोस्
हाम्रो गतिविधिलाई समर्थन गर्न डिजाइन गरिएको
पहिलो नजरमा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि ओ्रिजम डिजाइनरहरू चाहन्थे HS-3 सीन आउटडोर खेल प्रेमिका लागि एक विकल्प। हामी हेडसेटको कसरी छ हेर्छौं एर्गोनोमिक डिजाइन जुन कानमा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ। र एक सहज वजन किन यो प्रकाश छ को कारण।
ह्यान्डसेट छ उत्तम फिट सुनिश्चित गर्न बिभिन्न प्याड आकारहरू। र ती सबै माथि ध्वनि प्रदर्शन यी हेडफोनले प्रस्ताव गर्न सक्ने पूर्णको मजा लिन सकिन्छ। सान्त्वना महत्त्वपूर्ण छ जब हामी तिनीहरूलाई खेलको लागि प्रयोग गर्न जाँदैछौं, तर जान्दछौं कि हामी पनि उनीहरूलाई गुमाउँदैनौं।
मा बाहिरी भाग हेडसेटको हामी मध्यभागमा धातुको परिधि देख्छौं जसको हस्ताक्षर लोगो हो। केवल माथि हामी देख्छौं समर्थन मात्रै कानको माथि छ। una नरम प्याडिंगको साथ प्लास्टिकको तारको कठोर टुक्रा क्षेत्रमा जुन कानको पछाडि टल्किन्छ। जुन पनि आर होकुल निर्धारण को लागी समायोज्य र वास्तवमै सहज छ।
हेडफोनमा हामी फेला पार्दैनौं कुनै टच नियन्त्रण वा बटन छैन। यसका लागि ओडिर्म एचएस-3 सँग एक छ यो उपयोगी छ रूपमा स्वतन्त्र कीपैड सरल। मात्र तीन बटनहरू, अन र अफ, जुन पनि उत्तरहरू वा कलहरू ह्या hang्ग अप गर्न को लागी सेवा गर्दछ। र भोल्यूम नियन्त्रणको लागि दुई अन्य बटनहरू जुन डबल प्रेसको साथ ट्र्याकलाई अगाडि वा पछाडि सार्दछ।
यो पनि अवस्थित छ बटन क्षेत्रमा माइक्रोफोन फोनमा कुरा गर्न। र यसको एक तर्फ, "द्रुत चार्ज" चार्जका लागि जडान पोर्ट। यो एक कनेक्टर हो माइक्रो यूएसबी जसमा हामीसंग हुनेछ केवल minutes० मिनेटको लागि केबल जडान गर्नुहोस् रमाइलो गर्न संगीतको hours घण्टा सम्म निरन्तर।
El रातो रंगमा केबल यो परम्परागत हेडफोनको भन्दा अलि बढी बाक्लो देखिन्छ। यसले हामीलाई आश्वासन दिन्छ दुबै च्यानलहरूको आवाजको सही सिnch्क्रोनाइजेसन कुनै हेडफोनमा ध्वनि वा जडानको नोक्सान। र यो घाँटी पछाडि छ त्यसैले यसले काम गर्ने वा खेल खेल्ने कुनै समस्या उत्पन्न गर्दैन। के ती हेडफोनहरू जुन तपाईले खोजिरहनु भएको थियो? तपाईं अब किन्न सक्नुहुन्छ यस लिंकमा क्लिक गर्दै Origem HS-3 अमेजनमा।
आश्चर्यजनक गुणवत्ता ध्वनि
यद्यपि शारीरिक उपस्थिति धेरै महत्त्वपूर्ण छ कुनै पनि उपकरणमा, हेडफोनमा ध्वनि आवश्यक छ। र किनकि यो एथलेटहरूको तर्फ स्पष्ट अभिमुखीकरणको साथ हेडसेट हो, त्यहाँ केहि महत्त्वपूर्ण तत्वहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। अग्रिम खाता मा लिदै संयम र सुरक्षा कुनै समस्या हुनेछैन.
हामी वास्तवमै तपाईंको मनपराउँदछौं शक्तिशाली मात्रा स्तर। हामीले कहिलेकाँही हेडफोनहरू परीक्षण गरेका छौं जसको अधिकतम खण्डन छोटो हुन्छ। यो अधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ जब तिनीहरू घरको बाहिर प्रयोगको लागि हेडफोन छन्। त्यसकारण, एक हुनुको साथै राम्रो कडाई यसको intraural प्रणाली दिए, तिनीहरू यति ठूलो सोर गर्दछन् कि हामी केवल हाम्रो संगीत मात्र सुन्न सक्छौं.
तर संगीत मात्र चर्को स्वरमा चिनिदैन। हामी अचम्मित भएका छौं ध्वनि गुण हामी Oregm HS-3 मा भरोसा गर्न सक्छौं। बास स्पष्ट महसुस भएको छ। र ट्रबलको साथ आवाज स्पष्टता र गुणस्तर हामी धेरै महँगो उपकरणहरूबाट आशा गर्न सक्छौं। हामी त्यसलाई राख्न चाहन्छौं विकृति बिना महसुस अधिकतम गर्न। संक्षिप्तमा, ध्वनिको एक पक्ष जसमा HS-3 धेरै राम्रो नोट प्राप्त गर्दछ, र यहाँ तपाईं तिनीहरूलाई अमेजन मा पहिले नै खरीद गर्न सक्नुहुन्छ
ओ्रिजर्म फर्मले आफ्नो छाती HS-3 संग l छ भनेर देखाउँदछपहिलो हेडफोन नयाँ HDR टेक्नोलोजी फिचर गर्ने (उच्च गतिशील दायरा)। A एल्गोरिथ्म विभिन्न फ्रिक्वेन्सीहरूको स्वचालित रूपमा आवाजको समायोजन गर्न सक्षम छ। यस तरिकाले यो एक प्रदान गर्दछ केवल उत्तम स्टीरियो ध्वनि अनुभव.
Origem HS-3 विशिष्टता तालिका
हेडफोन प्रणाली इंट्राउरल
समर्थित दूरी १० मिटर सम्म
Carga माइक्रो USB पोर्ट द्रुत चार्ज
चार्ज समय 30 मिनेट
स्वायत्तता6घण्टा
नियन्त्रण गर्दछ Physical भौतिक बटनहरू
आयामहरू 18 x 10 x5सेमी
केबल लम्बाई 70 सेमी
वजन 20 g
मूल्य 94.99 €
लि link्क खरीद गर्नुहोस् Origem HS-3
पेशेवरहरू र Oregm HS-3 को विपक्ष
एक रन को लागी को लागी उत्तम छ वा बाहिर खडा खेलहरू खेल्नुहोस् कि उनीहरू झर्नेछन्, भाँच्नेछन् वा हराउनेछन्।
उपन्यास एल्गोरिथ्मको अफरको क्वालिटी HDR ध्वनि.
द्रुत चार्ज केवल minutes० मिनेटमा हामीसँग विराम बिना 30 घण्टाको संगीत हुनेछ।
स्प्याश र पानी प्रतिरोध धन्यवाद IPX5 प्रमाणीकरण.
आउटडोर खेलहरूका लागि डिजाइन गरिएको
एक छ केबलयद्यपि यो घाँटी पछाडि छ यो पुरानो शैलीको देखिन्छ।
टच नियन्त्रण छैन हेडसेटमा नै।
El मूल्य अपेक्षा भन्दा बढि छ र धेरै प्रतिस्पर्धी छैन।
केबल शैली बाहिर गयो
कुनै टच नियन्त्रणहरू
अपेक्षित मूल्य भन्दा बढी
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » Origem HS-3 हेडफोन विश्लेषण